Ihe karịrị 10,000 Ekele na Ime ụlọ ịsa ahụ, Nchịkọta Na-atụ aro!
Home / blog / Ihe karịrị 10,000 Ekele na Ime ụlọ ịsa ahụ, Nchịkọta Na-atụ aro!
2020 / 10 / 23 nhazi ọkwablog 1096 0
Chọta ụlọ ọhụrụ bụ otu n'ime ihe kachasị nwee obi ụtọ ị nwere ike ime, ọ bụkwa ebe ị nwere ike itinye nrọ gị niile maka ọdịnihu ka mma. Enwere ike ịsị na atụmanya anyị niile maka ọdịnihu zoro ezo n'ịchọ ụlọ anyị.
Ọ naghị adị mfe mgbe niile ịchọta ngwọta kacha mma, ọkachasị ma a bịa n’ihe gbasara ime ụlọ ịwụ.
European, American, extravagant, minimalist, industrial, Scandinavian, Chinese, Japanese, ụdị dị iche iche nke ụlọ, nke ọ bụla nwere amara pụrụ iche ya, ma ọ bụ ọkaibe, ọmarịcha ma ọ bụ ọmarịcha, avant-garde cool, or simple and fresh ……
Ejiji na ndị bara uru – Oge a dị mfe
Minimaldị minimalist nke oge a bụ otu n'ime ụdị ụzọ kachasị mma na ndụ. Ihe dị mfe apụtaghị ịdị mfe. Imaldị Minimalist nwere ike iyi ihe dị mfe, mana ọ dịkwa nha na ọgbara ọhụụ.
Minimaldị nke oge a dị ntakịrị bụ ụdị ejiji ewu ewu na mba ụwa nke oge a ma ndị mmadụ afọ ọ bụla nwere ike ịnakwere ma hụ ụdị a n'anya.
Ihe dị mfe adịghị mfe.
Enweghị ihu abụọ nke ịchọ mma.
Linessdị ọcha dịkwa mma.
Ọtụtụ Nchekwa, Ike
Nnukwu drawer ikike maka ihe ijuanya
Full nke agadi - Ìhè na Anddị Oké Mkpa
Styledị dị egwu, oké ozu mesiri ike na elu mma, okomoko abụghị cliché.
Ekwesịrị m ịsị na ụdị mmefu ego a dị elu na nke dị elu ejirila anya nke ọtụtụ ihu na ndị na-achịkwa mma, ọ dịkwa mma maka ezinụlọ na-agbaso ndụ dị elu.
Imebiga ihe oke apụtaghị ịbụ onye a ma ama.
Ngwunye ụda kwesịrị ekwesị
Ọ na-enye ohere ahụ dum inwe mmetụta dị elu.
Feng Shui mirror design, mgbanwe na amamiihe
Ogwe ndị na-acha ọcha ọcha, dị ọcha ma mara mma
Uwe ndi mmadu - Ulo oru
Fashiondị ejiji nke ụdị ụlọ ọrụ pụrụ ịdị nnọọ ike.
Igwe iron, ojii, ọcha na isi awọ, juputara na afọ ndi ezi uche na ndi egbochighi. Designdị nhazi a nwere àgwà siri ike ma nwee mmasị na ya.
Black, ọcha na isi awọ na nchịkọta aghụghọ
Black nwere ike ịbụ ala mara mma.
Mgbakwunye ọkụ na-enye ohere ohere ịnweta teknụzụ
Obere obere bekee na-acha ọcha
Oge gboo na ejiji- New Chinese Style
Chinesedị ọhụrụ China, nke mere na ọdịbendị ọdịnala nke ọdịnala na ejiji ejiji oge a, nkwanye ugwu ọdịnala nke China na ịdị mma nke akparamagwa abụọ, nke oge gboo na nke ejiji, mmezu nke ụdị ọhụụ China ọhụrụ.
Enwere ike ịsị na ụdị ọhụụ ndị China na-eme ka ọ bụrụ na ndị nne na nna na-eto eto.
Ọbụbụeze na ịdị mma na-ebikọ ọnụ
Nnukwu ebe nke oghere ọcha
Na-egbochi ohere ka ọ ghara ịba ụba
Na-enye anyị ohere ka anyị chee echiche.
Symmetrical imewe, nnọọ Oriental art
Ihe ọla maka arụrụala oke
Ndị mmadụ nọ n’afọ ndụ dị iche iche, ndị mmadụ nwere, na mkpa dị iche iche nwere mmasị dị iche iche maka ụdị ụlọ ha dị. Styledị nke ọ bụla nwere ọdịdị na ọdịdị nke ya.
Uche ụlọ dị iche iche nwere ike iweta ọnọdụ dị iche iche. Họrọ ihe eji eme ka afọ ju gị ma mee ka ọnọdụ gị nwee obi ụtọ.
Nke gara aga :: Ath maara Horlọ mposi “Na-esi ”sị” Dị Njọ Chọta Isi Ikike Kwadoro Ya! Osote: Onye Nwere Audacity Iji Bugharịa Oke Ọhịa N'ime athlọ Ihe Nri! Mana Ọ masịrị m ~~~